ဘာလို့ ကာလီဖိုးညား မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ချိုင်းနား မှာထုတ်လုပ်သလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဘာလို့ ကာလီဖိုးညား မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ချိုင်းနား မှာထုတ်လုပ်သလဲ?
ဘာလို့ ကာလီဖိုးညား မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ချိုင်းနား မှာထုတ်လုပ်သလဲ?
Posted by ムラカミ on Jan 23, 2012 in Business & Economics, Computers & Technology | 17 comments
ဘာလို့ ပန်းသီးထုတ်ကုန်တွေဟာ ကာလီဖိုးညား မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ချိုင်းနား မှာထုတ်လုပ်သလဲ?
စရိတ်သက်သာလို့ပေါ့ လို့ လွယ်လွယ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မှန်တဲ့အဖြေပါ…
ဒါပေမယ့် what lies beneath ကို သည်မှာ သည်လိုလေး ဆွဲထုတ်ထားလို့
ဘာသာပြန်ပြီး တင်လိုက်ရပါကြောင်း …။
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad, Mac ရဲ့ ကျောဘက် ဒါမှမဟုတ်နောက်ဘက် ကိုကြည့်လိုက်ပါ ဒါမျိုးရေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…။
သမ္မတကြီး အပါအ၀င် အမေရိကန် အတော်များများ ဟာ ဘာလို့ Outsourced လုပ်ချထားသလဲ ဆိုတာသိချင်ပါလိမ့်မယ်…။
မနှစ်က top US technology executives တွေနဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား ဟာ ညစာ စားပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ် …။ အဲ့သည့်မှာ Steve Jobs
ကို သည် Outsourced လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို states ကို တတ်စွမ်းသမျှ ပြန်ယူဆောင်ပေးနိုင်မလား
လို့ မေးခဲ့ပါသတဲ့ ..။ Steve ကတော့ သည်ကိစ္စဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ လုံးဝ မရှိပါဘူး လို့ …ရတိပြတ် ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်…။
ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရသလဲ ….ဘာလို့ Apple Inc. ရဲ့ မှော်ဝင်ထုတ်ကုန်တွေကို States မှာ ထုတ်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ရတာပါလဲ ..။
ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင် အမေရိကန်အခြေစိုက် လူသုံး လျပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ဘာလို့ ထုတ်ကုန်တွေကို
ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး အလုပ်အကိုင် တွေ ပေါကြွယ်ဝစေခြင်းဖြင့် ကျနေတဲ့ စီးပွားကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးဖို့
The New York Times ဟာ သည်မေးခွန်းကို မေးခဲ့ ပါတယ် … Apple က ယခင်နဲ့ ယခု CEOs တွေကို မေးခဲ့ပါတယ်
အဲ့သည့်နောက် အလွန်အမင်း အသေးစိတ် သုသေသနပြုခဲ့ပြီး ထွက်လာခဲ့တာကတော့ ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အမှန်တရား
တခုပါ...အဲ့ဒါကတော့ အမေရိကားမှာ ထုတ်ဖို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ ...။ အမေရိကန်ရဲ့ infrastructure နဲ့ လုပ်သားထု
အနေအထားဟာ Apple ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အဆင့် လယ်ဗယ်လ် တခုမှာ ရှိမနေပါဘူး ..ပြောရရင် နီးတောင်မနီးစပ်တဲ့
တရုတ်ပြည်က Apple ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံမှာ ၀န်ထမ်း အင်အား ၂၃၀ ၀၀၀ (၂သိန်း၃သောင်း) ရှိပါတယ်..။
US မှာ ထို လူဦးရေ ထက်ပိုတဲ့ မြို့ ဆိုလို့ ၈၃ မြို့ရှိပါတယ် ….။ ဒါဟာ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ဖြစ်ပြီး ..အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း
ရှိတဲ့လူဦးရေဟာ စုပေါင်း လူဦးရေ ရဲ့ 65% သာ ဖြစ်တာမို့လို့ ..သည်လောက် လုပ်သားဦးရေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ မြို့ဆိုလို့
မြို့ပေါင်း ၅၀ ပဲ ရှိတာပါ… ။(မြို့ ကလူတိုင်း Apple စက်ရုံမှာ လုပ်ရမှာနော…) ။ သည်တော့ သည်လူ ရင်းမြစ်ဟာ
အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ New York ရဲ့ စုပေါင်းလူဦးရေ 3% ဖြစ်နေပါတယ်.. ။မြို့သား ၁၀၀ မှာ ၃ယောက်က ပန်းသီးဖုန်းတွေ
ထုတ်ရမယ်ပေါ့ ….။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဘူး လို့ ဆိုလိုတာပါ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် တုန်းက Foxconn(Apple Product ထုတ်လုပ်သူ တရုတ်ကန်ပနီ)ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အနေအထားနဲ့
ပါတ်သတ်ပြီး အသံတွေအတော် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်…။စက်ရုံဝန်းထဲမှာပဲ လူ ၂သိန်း၃သောင်းထဲက
အများဆုံး လူ ၆သောင်းလောက်ကို စက်ရုံပိုင် ၀န်ထမ်းအိမ်ယာတွေနဲ့ ထားရှိပါတယ်..။ Foxconn City ဆိုတဲ့ အဲ့သည့် စက်ရုံ
နေရာကြီးက ၀န်ထမ်းတွေဟာ တပါတ် ၆ရက် ၁ရက် ၁၂နာရီနှုန်းနဲ့ အလုပ် လုပ်ကြရပြီး ၁ရက် ၁၇ဒေါ်လာ နှုန်း သာရကြတာပါ..။
(၁ဒေါ်လာ ၈၀၀ကျပ် နှုန်းနဲ့ဆို – ၁ရက် ၁၃၆၀၀ကျပ် နဲ့ တလ-၂၂ရက် နှုန်း ဆို ၂၉၉၂၀၀ ကျပ်) ၃သိန်းနီးပါးသာ လခ ရကြတာပါ..။
Americal standards အရတော့ ဒါဟာ လူမဆန်မှု ၊ လူသားချင်း မစာနာမှု လို့ ပြောစရာဖြစ်ပေမယ့် တရုတ်ပြည်မှာတော့ သည်
အလုပ်ကိုပဲ လူကြိုက်များလှပါတယ်…။ ယခင် Apple ရဲ့ worldwide supply demand manager : Jennifer Rigoni ကသည်လို
ဆိုပါတယ်…။ Foxconn မှာ ညဆိုင်း အလုပ်ဆင်းဖို့အတွက် လူ၃၀၀၀လောက် ပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်တဲ့..။
တရုတ်တွေဟာ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမှာ scale, speed နဲ့ efficiency မှာ US လုံးဝမယှဉ်သာတာတွေ သက်သေပြနိုင်တဲ့
ဥပမာ ဥပမေယျ ကောင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်..။ အစိတ်အပိုင်း A ကို slot B တွင် တပ်ဆင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ လူ၂သိန်း
ကျော်ခန့်ဟာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းမှုမရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းအင်အားစု သက်သက်သာဖြစ်ပြီး ၊ သူတို့ ကို ရှုထောင့်အစုံက ကြီးကျပ်နေတဲ့
အင်ဂျင်နီယာ က အယောက် ၈၇၀၀ ပါ။ သည်လူတွေရဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ကတော့ Times ရဲ့ စစ်တမ်းအရ US က qualified
engineers အချိန် ၉လ ကြာအောင် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြသနာ အခက်အခဲမျိုးတွေကို အနှီ ငတိတွေ ၁၅ရက်နဲ့ အပြီးရှင်းနိုင်ပါသတဲ့..။
(အဲ့လောက် တော်နေသလား ..မဖြစ်နိုင်ဘူး …လို့ မငြင်းကြပါနဲ့ ခင်ဗျား ….pre-caution မယူတာ …laws တွေ rules
တွေ မတင်းကျပ်တာ… documentation works တွေ မဖိစီးတာ နဲ့တင် reverse-engineering နဲ့တင် အချိန်အတော် အကုန်
CPU ဖြစ်တဲ့ A5 Processor ကလွဲရင် အများစုသော iPhone အစိတ်အပိုင်းတွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သီးခြားစီ ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်.။
ပြီးတော့မှ Foxconn မှာ တပ်ဆင်ယူတာပါ…။ အမေရိကန် အခြေစိုက် စက်ရုံတခုခုမှာ သာ လုပ်မယ် ဆိုလို့ကတော့ …သည်ပစ္စည်းတွေ
ရဲ့ သင်္ဘောတင်ခ တခုတည်းကပင် အလွန်ပင် စ၇ိတ်ထောင်းနိုင်ပါတယ်…။ထို့အပြင် ထုတ်လုပ်မှု တိုင်မင်လည်းအောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းတွေကို outsourced လုပ်ချပစ်ခြင်းရဲ့ ခုခံကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ ရိုးရာလို သုံးနေတဲ့စကားလုံးက စရိတ်ပါ…။
US မှာ လုပ်ရင် စရိတ်ပိုထောင်းမယ် ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါဟာ ဘာကို ရည်ညွှန်းသလဲဆို ..၀န်ထမ်းတွေကို လုပ်ခ ပိုပေးရမယ်..
ခံစားခွင့်ပိုပေးရမယ် အာမခံ ပိုထားရမယ် အခွန်အတုတ် ပိုထမ်းရမယ်. .အရာရာ စရိတ်ပိုလာပါမယ်။ ကန်ပနီတွေဟာ အကျိုးအမြတ်
အတွက် ရပ်တည်တာပါ ..သည်တော့ ကတ်စတမ်မာတွေဟာ ပိုဈေးကြီးကြီးပေးသုံးရဖို့ ရှိလာပါလိမ့်မယ်..။
US မှာ သာ iPhone ထုတ်ရင် ဒေါ်လာ ထောင်ချီ တန်ပါလိမ့်မယ်..။ အခြားအခြားသော ၀န်ဆောင်မှုစရိတ်တွေ ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်
iPhone 4S 16GB ဟာ ဒေါ်လာ၁၀၀၀ အနည်းဆုံး ပါပဲ ..။
ကုန်ကျစရိတ် တစ်ခုတည်း ဟာ outsourcing အတွက် အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး …။ Apple ရဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ ထုတ်ဖို့
ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲ ကြည့်ရင် ကမ္ဘာမှာ အမြန်ဆုံး နဲ့ အများဆုံး ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ပြီး Apple ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ
စက်ရုံဘက်က လိုက်လျောညီထွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ Apple executive က သည်လိုပြောပါတယ် “US ဟာ ကျနော်တို့ လိုအပ်တဲ့ skill ရှိတဲ့ လူ့စွမ်းအား ရင်းမြစ်
ထုတ်လုပ်မှု ကိုရပ်ထားလိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ် “တဲ့
(စကားလှ အောင်ပြောတာပါ …တကယ်က သူလိုချင်တာဟာ ဈေးချိုတဲ့ unskilled labourပါ ..ပညာရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး
အစစ မြင့်တက်နေတော့ ခပ်ညံ့ညံ့ ရှားသွားတာလည်း ၁ဒုက္ခပါလားနော်….)
iPhone ရဲ့ အစောပိုင်း ကာလတွေတုန်းက ပုံပြင်လေး တစ်ခုပါ..။ခုတော့ ယုံရခက်ကြီးပေါ့ …။ မူလ iPhone ရဲ့ screen ဟာ
ခြစ်ရာပွန်းရာ အလွယ်တကူထင်ကျန်စေတတ်တဲ့ ပလတ်စတစ်နဲ့ ထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့..။
၂၀၀၇ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းမှာပေါ့ … iPhone ထွက်ဖို့ ၁လခန့်အလိုမှာပါ …Steve ဟာ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ထည့်ထားတတ်တဲ့
iPhone screen ဟာ အစင်းရာဒါဇင်ချီပြီး ထင်ကျန်နေတာ ကို သတိထားမိသွားပါသတဲ့ …။
“ငါဟာ ခြစ်ရာထင်းရာ ဖြစ်လွယ်လွန်းတဲ့ ပစ္စည်းကို ရောင်းစားမှာ မဟုတ်ဘူး …သည်တော့ဖန်သားမျက်နှာပြင်လိုချင်တယ်
ဒါကို ရက်သတ္တ၆ပါတ်အတွင်း perfect အနေအထားမြင်ချင်တယ်” လို့ဆိုခဲ့တာပါ ..။
Steve ရဲ့ အလုပ်မှာ တိကျပုံကို ပြောရင် ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး ..သေချာတာတခုကတော့ သည်ဖုန်းဟာ သူ့ဟာသူ သတ်မှတ်တဲ့
standards တွေထဲမ၀င်ရင် အဆင့်မမီရင် သူရောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး …၆လ လောက်အချိန်ယူရမယ် လို့ အများစုက ခန့်မှန်း
တွက်ချက်ထားတဲ့ ပြသနာပါ …..သည်သတင်းနဲ့ အတူ ဈေးကွက်မှာ ဦးကျိုးပြီး ရူးကြောင်ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်သေးရဲ့..။
သည်လိုမျိုး ဖြန့်ချိကာနီးကာမှ ပြောင်းလဲမယ် ပြင်ဆင် မယ် ဆိုတာမျိုး US ထုတ်လုပ်ရေး ဘက်မှာ လုပ်လို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.
Apple ဟာ နာမည်ကျော် Corning Incorporated ကနေပြီး အစင်းမထင်တဲ့ မှန်အမျိုးအစား တစ်မျိုးကို အော်ဒါမှာယူပြီးနောက်
အချိန် ၆ပါတ်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှု ကို စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ….။ Foxconn ဘက်ကလည်း အသစ် ပြုပြင်လိုက်တဲ့ Apple
ရဲ့ design ကို လိုက်လျောညီထွေ ပူးပေါင်း နိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ …။
ဒါဟာ အမေရိကန် စက်ရုံလောကမှာတော့ ဘယ်လိုမှ အစဉ်အလာ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ …။ဖြစ်နိုင်စရာလည်း လုံးဝမရှိတဲ့
Apple ဟာ US မှာ ၀န်ထမ်း ၄၃၀၀၀ ကျော် အလုပ်ခန့်အပ်ထားပါတယ် ..သည်အရေအတွက်ဟာ တရုတ် စက်ရုံရဲ့ ၅ပုံတပုံသာ
ရှိပါတယ်… Apple ရဲ့ အောင်မြင်မှု ဟာ ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ US ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ကို မသုံးခဲ့လို့ လို့ ငြင်းမယ်ဆို ငြင်းနိုင်ပါတယ်…
သို့သော် ဘယ်တော့မှ Apple ဟာ US ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ကို အသုံးပြုမှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ ….။
(Outsoruce အလုပ်ကောင်းလို့ စီးပွားပျက်တယ် ပြောကြပါတယ် … သည်စာ စုကတော့ Outsourced မလုပ်ဘဲ ….ပေပြီး
ပြည်တွင်းမှာသာ ဈေးကြီး ကြီးနဲ့ ထုတ်ရင် ကုန်ချောလည်း ဈေးတက်လာမယ် သုံးနိုင်တဲ့လူလည်း နည်းလာမယ်…အမြတ်အစွန်း
နည်းလာပြီး ရောင်းမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပုံလာလို့ ကန်ပနီ ပျက်ရင် အလုပ်လက်မဲ့ပိုပေါလာမယ် စီးပွားပိုကျလာမယ်….
စီးပွားပျက်တဲ့ကိစ္စမှာ “ဟာ” နေတဲ့အချက်တွေကို ပြန် “သ” ဖို့ မလုပ်ဘဲ …Outsourced ကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
ဆုံးရှုံးရတယ်ဆို ပြီး အော်နေတာတွေ ရပ်သင့်ကြောင်းရယ် … Outsourced က တဖက်တလမ်းက သွယ်ဝိုက် ကျားကန်ပေးထားတယ်
ဆိုတာကို ထောက်ပြချင်တာလို့ ယူဆပါတယ်…. )
Ref: Why Apple’s products are ‘Designed in California’ but ‘Assembled in China’ by Chris RawsonJan
မှတ်သားသွားယုံကလွဲ ကျန်တာ ဘာဘာ ဘားမှ မသိမို့ 
နောက်ထပ်လဲ ဆက်လက် တူးဆွပေးပါဦးလို့ ဘဲ
မနေ့ကပဲ..စီအန်အန်မှာ.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်သမ္မတလောင်း စကားရည်လုပွဲထဲ.. ပန်းသီးက.. တရုတ်ပြည်ထဲ..လူငါးသိန်းအလုပ်တွေပေးထားတဲ့အကြောင်း ထည့်ဆွေးနွေးသွားတယ်…။
တရုတ်ရဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ပေါများမှုက သူ့ရဲ့ အဓိက အားသာမှုလို့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝကို လက်ခံထားပါတယ် ( ကိုယ်ပိုင်အမြင်မျှသာ) ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခုနောက်ပိုင်း ဘယ်လို ဟာပဲ brand ပဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ပြည်တွင်ထုတ်လုပ်သည်လို့ ကတော့ ပြေးမလွတ်တွေ့နေရပါတယ်။
နောက် ဘယ်လို ဟာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူက လက်သင့်ခံ ထုတ်ပေးနိုင်ရုံသာမက လုပ်သားဈေးပေါတာကလည်း တချက်ပါ။ သူငယ်ချင်း တယောက်ထိုင်ဝမ်မှာ ပညာသင်ရင်း တဖက် အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီစက်ရုံမှာ နေ့လည်စာစားချိန်ဆို ထိုင်စရာနေရာတောင် မရှိပါဘူး။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး စားခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူလည်း ဒူပေဒါပေ အတော်လေး ခံခဲ့ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ သူပြောတာ နားထောင်ပြီး တခါတခါဆို ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း သူတို့ ဆီက လုပ်သားများရဲ့ တစိတ်တဒေသကို ကိုယ့်နီးစပ်ရာမှာ တွေ့ခဲ့ဖူးတာပါ။ သူပြောပြလို့လည်း အတော်များများကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလက်ရှိဒီမှာ ပစ်စည်း တခုကို အတုရချင်ရင် ဟိုကို နမူနာပေးပြီး ထုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ ချွတ်စွတ်တူစေရမယ် ဈေးသက်သာစေရမယ် ။ဥပမာ ယိုးဒယားက လာတဲ့ အလူမီနီယံဆို ဈေးပိုတယ်။ သို့သော် တရုတ်ကို နမူနာပြပြီး လုပ်ခိုင်းရင် အရည်အသွေးတူ ပုံစံတူရတယ် ။ သုံးနေကျတောင် ခွဲမရတတ်ဖူးနော်။ ပြီးရင် ယိုးဒယားဆိုပြီး ဒီမှာ သွင်းရင်ဘယ်သူမှ မသိဘူး။ သွင်းတဲ့လူက အမြတ်ပိုတယ်။ သာမန်ထက်တော့ ဈေးပိုတယ် ဒါပေမဲ့ ယိုးဒယားထက် ဈေးသက်သာတယ်။ အရည်အသွေးကတော့ ကိုယ်က သေချာထိန်းထားနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ မသိပဲကွက်ပျောက်စားလို့ရတယ်။
ဒါက အခုလက်ရှိ တရုတ်ရဲ့ အားသာချက်တွေထဲက တခုပေါ့။ မျက်စိရှေ့မှာ မြင်ဖူးတာလေး ပြောကြည့်တာပါ။ စီးပွားရေးသမားများကတော့ ဒါမျိုးဆို နောကြေနေပါပြီ။
လူသားအရင်းအမြစ် တရုတ်မလေးတွေရေသိပ်ချိုးလေ့ မရှိဘူး ရေပတ်လောက်ပဲတိုက်တာ
တရုတ်လုပ်သားတွေ လုပ်ခသက်သာတယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်ထက်တော့ ပိုရပါသေးတယ်။
သူတို့ရဲ့ mass production ကို ဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို့မရ ဖြစ်နေတယ်။
သတင်းကတော့ မြန်သကွယ်။ ၂၄နာရီ အတွင်းမှာကို တက်လာတာဘဲ။
ဦးညွှတ်ပြီးရင်း ဦးညွှတ်ရင်းပါဘဲ တူတော်ဖားရယ်။
ဒီလို စက်ရုံတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာတော့မှာပါ မှန်းရတာဘဲ။
စကားမစပ်- အောက်ကရေရင် ၂ပုံမြောက်က ကောင်မလေး အတော်ချစ်စရာကောင်းပါ၏။
ဟိုးအရင်ကတည်းက တစိုက်မတ်မတ်ပြောခဲ့တဲ့.. စကားပြန်ကောက်ရရင်…
မြန်မာပြည်မှာ.. အလုပ်သမားရင်းမြစ် လုံလုံလောက်လောက်မရှိပါဘူး..။
ဒီတိုင်းပြည်အကျယ်နဲ့.. ၇ီဆို့နဲ့.. မြန်မာ့လူဦးရေ သန်း၁၀၀ ကျော်နေသင့်တယ်…။
လူပျို/အပျိုကြီးများ အမြစ်ပြုတ်ရေး.. ဒို့အရေး..ဒို့အရေး.. (၃ခါအော်ပါ)
လုပ်သား ၂သိန်း ၃သောင်းနော..
ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နယာက ၈၇၀၀……
ဘယ်လိုမှ ဆပ်ပလိုင်း ..မလုပ်နိုင်တဲ့ ….ပမာဏပါ….
သည်တော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် …မန်နျူဖက်ချာရာ မ၀င်နိုင်တဲ့ အနေအထားပါ လို့ .. သုံးသပ်လိုပါ၏…
လက်တလောတော့ MNCs မ၀င်သေးဘဲ …SMEs လောက်ပဲ ၀င်ပါဦး….အတော်လေး မဆိုးပါဘူး ဟု ဖြေတွေးမိပါကြောင်း…
ဟိုကြော်ငြာလေးကို ကိုးကားပီး မန့်ရရင်ဖြင့်….
မငိုပါနဲ့တော့ သားလေး စိန်စိန်… SMEs ၀င်လည်း မနည်းပါဘူး …
ဖေဖေ မေမေတို့ ..၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူပါတယ်……ဟီး…
လူပျို/အပျိုကြီးများ ကို ခနထားပါဦး သဂျီးရဲ့…
အိမ်ထောင် ရှိပီးသားတွေထဲက ပဲ ကလေး ..၁ယောက်ရှိ ၂ယောက်မွေးရေး ၂ယောက်ရှိ ၃ယောက်မွေးရေး
က စပြီး ပလင်န် ရင် ပိုလက်တွေ့ကြမလားပဲဂျာ…
သူကြီးရယ် – မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင် စကောင်း လို့ကတော့ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေ ပြန်ဝင်လာမပေါ့။
နောက်ပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေး ဖူလုံလို့ကတော့ နောက်ဆက်တွဲ က ကောင်းလွန်းလို့ နောက်ပိုင်း တရုပ်လို ခလေးတစ်ယောက် စီမံကိန်း ထုတ်နေရပါဦးမယ်။
မြန်မာဆိုတာ မိသားစုကြီးကြီး ကြိုက်တတ်ကြတာကလား။
သူကြီး – ရိုသေသော်ငြား မှားသည်ကို မှားသည်ဟု ထောက်ပြခွင့်ပြုပါ။
“ဒို့အရေး” ဆိုတာ မမှန်ပါ။ “သူတို့အရေး” သာဖြစ်သင့်ပါသည်။
သူကြီး က “ဒို့အရေး” ဆိုပါက လူဦးရေ တိုးပွါးရေးရာ ကိစ္စ၌ သူကြီး တနည်းနည်းဖြင့် ပါဝင် ပါတ်သက်ချင်ပုံရသည် ဟု ယူဆရပါသည်။
သူကြီးကတော်အား ကျွန်မ မလတ် မှ အမြန် အကြောင်းကြားရပါလိမ့်မည်။
သို့သော် “ဒို့အရေး..ဒို့အရေး.” ဟု ၂ကြိမ်မှာပင် ရပ်နေသောကြောင့် ဒီတစ်ခါ သက်ညှာလိုက်ပါသည် ရှင့်။
ဆင်ခြင်ပါ သူကြီး။ ;-)
မနေ့ကပဲ.. လူပျိုကြီးတယောက်နဲ့.. အိမ်ထောင်ရှင်တို့.. ..တရုတ်နဂါးနှစ်မို့.. နဂါးကလေးကိစ္စ. အပြန်အလှန်ချွန်တွန်းလုပ်နေကြတာ.. သတိရမိတယ်..။
ကိုးလလွယ်၁၀လမွေးမို့.. ၂လနဲ့.. အိမ်ထောင်ပြုဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ရာ အချိန်မရတာလည်း ပါသေးရဲ့…။
မြန်မာ့လူဦးရေ ၅နှစ်အတွင်း… သန်း ၁၀၀ ပြည့်ရေး.. “ဒို့အရေး”/ “သူတို့အရေး”
အဟမ်း – အကြံပြုရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် …..
နဂါးဖြစ်မဲ့ ခလေးကို ရဖို့ အဓိကလား။
မြန်မာ့လူဦးရေ ၅နှစ်အတွင်း… သန်း ၁၀၀ ပြည့် ဖို့ အဓိကလား။
စက်ရုံတွေ စဆောက်ဖို့ အဓိကလား။
ခေါင်းခြောက်အောင် အဖြေရှာမနေနဲ့ဦး သူကြီးရေ့။ ;-)
တရုတ်က လူပေါတယ်.. ဒီမှာ ဒီလောက် လူဦးရေ များများ မလွယ်ဘူး ထင်တယ်။
သူတို့ နှုန်းနဲ့ ရရင်တော့ ဒီမှာ လုပ်ချင်လွန်းလို့ တန်းစီနေကြမှာပဲ..
စက်ရုံတွေ တည်နိုင်ရင်တော့ တကယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် တောတွေမှာတောင် ကောက်စိုက်ဖို့ လူငယ်မရှိလို့ လူကြီးတွေပဲ မနည်းရုန်းကန် နေကြရတယ်။ လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်သားတွေ ရွေ့ပြောင်းသွားခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ပေါ့။
လယ်သမားတွေလည်း မပင်မပန်းနဲ့ ၀င်ငွေကောင်းကောင်း ဖြစ်နေမှ မဟုတ်ရင် စပါးကျည်ကြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် စီမံကိန်းချ ထားရတာမို့ မဖြစ်မနေစိုက်ပြီး ၀မ်းရေး အတွက် လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင်သူတွေက မြို့ပေါ်နဲ့ ပြည်ပ ရောက်ကုန်ကြရတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ အစ ဆွဲ ထုတ်သလို ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။
သူကြီးကတော့ ဒို့ အရေးဆိုနေပီ။ခက်နေပီဗျို့ ။
ကယ်လီဖိုးနီးယား ကပစ္စည်းက တရုတ်ပြည်မှာ
ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းကို ကြိုက်တယ်ဆိုပေမယ့်
ကျုပ်ကတော့ “ဟော်တယ်ကယ်လီဖိုးနီးယား” ဘဲ သိဒယ် ။
တရုတ်က ဗမာပြည်လို (တတိယနိုင်ငံ)တွေကိုသာ သူတို့အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုကထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းအစုပ်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းပြီး..ခဏခဏပျက်နေတာပါ..
Europe ဘက်က Made in China ထီးတစ်လက်ကို ကျွန်တော်သုံးနေတာ (၇)နှစ်ကျော်သွားပါပြီ…
ဒီဇိုင်း ဘိုင် ကာလီဖိုးနီးယားဆိုတာနဲ့တင်…
တရုတ်က အဖြုတ်အတပ်အဆင့်ပဲရှိပြီး ဒီဇိုင်းရော၊ အဓိက CPU ရောကို မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်..
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ လေးပါ ခုခေတ် မှာ outsourcing ဘယ်လို့ မှ တားလို့မရတော့ပါဘူး ကိုfattycat ပြောသလို့ ပဲ imported item ရဲ့ အရည်အသွေး ကတော့ လက်ခံတဲ့ တိုင်းပြည်တွေရဲ့စံနှုန်းပေါ် မူတည်ပြီးတရုပ်ကြီး ကထုတ်တာပါပဲ ဗမာ့ပြည်ကို လာတဲ့အရည်အသွေး ကတော့ပြည်တွင်းရောင်းနိုင်တဲ့ ဈေး ကို ကုန်သည် က အမြတ်ရအောင်လုပ် ထားတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့outsourcing တွေ ဗမာပြည်ထဲ ကိုရောက်လာရင်တော့ သိပ်ကောင်းမယ် ကျွန်တော်တို့မှာ လူ အရင်း၇မြစ် က တရုတ်လောက်လဲ မများ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေလဲ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေကျတာ အဲဒီကကတော့ လျပ်စစ်မီး မှမှန်မှန်မလာတာ ဗျာ ဒီ outsourcing အလုပ် တွေ က ဖရောင်းတိုင်တွန်း အင်ဗာတာနဲ့ မှ လုပ်လို့ မရတာဗျာ ဒီတော့ကာ limited resources ဖြစ်တဲ့ မကုန်သေးတဲ့မြေအောက်ကလေးတွေပဲ ဖော်ရောင်း ကျန်နေတဲ့သစ်ပင်မြစ်လေးတွေ တူးရောင်း …
ဘယ်လိုမန့်ရမှန်းမသိအောင်တော်တော်လေး ဗဟုသုတရပါတယ် ဂီဂီ ခေါ်ရမလား ဖားသက်ပြင်းခေါ်ရမလား ၅မည်ရ ပြည်ရွှေဘိုရေ ။ ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်သုံးစွဲပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေသိရှိပြီး (မှန်မှာအစင်းမထင်အောင်) ပြုပြင်နိုင်တဲ့ finishing ကောင်းတာလဲ အောင်မြင်မှုအတွက် အချက်တချက် လို့ထင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်ဆောက်ရင်ဖခင်ဖြစ်သူက လက်သမားတွေလုပ်ပြီးရင် ပြတင်းပေါက် တွေတံခါးတွေကို လိုက်ဖွင့်ကြည့် ပိတ်ကြည့် ဂျက်ထိုးကြည့်လုပ်တယ်။ ငယ်တော့ ဒါဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ အဖေဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်မှာ ပိတ်မရတဲ့တံခါး ၊ ထိုးမရတဲ့ဂျက်ဆိုတာမရှိတော့ ဒီလိုမျိုးက ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ ယူဆခဲ့တယ်။ကြီးလာတော့မှ တံခါးတွေပိတ်မရ ဂျက်တွေထိုးမရတာတွေတွေ့တော့မှ ဖခင် လုပ်ခဲ့တာကိုသဘောပေါက်တယ်။